Goondaan Awutobisii sochoosuu akka dandeessu beektuu? - BBC News Afaan Oromoo
Goondaan Awutobisii sochoosuu akka dandeessu beektuu?
Goodayyaa suuraa Goondaan asiidii kana kan maddisiisu yoo waa ciniinu dha
Gareen barattootaa Yuunivarsiitii Neezarlaandis miseensoota 40 ta'an qabuu fi "TEAM FAST" jedhamuun beekamu, mala geejjibaa naannoo hinfaalle fi tattaaffii jijjiirama qilleensaa to'achuuf godhamaa jiru deeggaru kalaquuf hojjetaa turan. Argannoon isaaniis Awutobisii guddaa asiidii goondaan maddisiistu "Formic Acid" jedhamuun socho'udha.
"Awutobisii addunyaaf illeen kan jalqabaa ta'e fi kan asiidii Foormiik jedhamuun hojjetu kalaqne. Asiidiin kun Hayidiroojinii caalaa rakasaa fi faalama naannoo keessattis gumaata caalmaa kan qabu dha," jedha miseensaa garee kanaa kan ta'e Lukaas Van Chappelen.
Egeree keenya Ijaaraa jirra
Garee barattootaa, "TEAM FAST"
Barattootni kunneen asiidii haaraa boba'aa konkolaataa omishuuf salphaa ta'e fi gatiin isaas gosoota boba'aa haromfaman kanneen biroorra rakasa ta'e, mala ittiin walitti qabanis mijeessanii jiru.
Asiidiin kun uumamaan kan argamuu fi goondaa dabalatee ilbiisoonni xixiqqoon yeroo waa hiddan kan maddisiisanidha. Jechi Formiik jedhu kunis jecha Laatiin hiikkaan isaa Goondaa jedhu irraa kan maddeedha.
Goodayyaa suuraa Garee barattootaa "Team Fast" jedhamu Awutobisii haaraa kalaqan waliin
Gareen kun asiidicha bifa salphaa ta'een gara boba'aa konkolaataa sochoosutti jijjiiruun, moggaasa maqaa Haaydrooziin jedhamu kennaniifii jiru.
"Boba'aa kanas konkolaattonni salphaatti guuttachuu fi bakkaa bakkatti konkolaachisuus ni danda'u. Dabalataan konkolaattonni boba'aa kana fayyadaman Karbon Dayooksaayidii fi bishaan qofa gadi dhiisu," Jedha Lukaas.
Dhuma bara kanaatti Awutobisiin kun imala akka eegaluuf, sagantaalee beeksisaa fi agarsiisaatiif industiriiwwan gara garaa irratti dhiyeessuuf karoorfamee jira.
Goodayyaa suuraa Awutobisii boca goondaan hojjetame
Karoorri kun dhugoomee Awutoobisii kanneen gabaa keessaatti arguu dandeenyaa laata?
"Buuufataalee boba'aa gosoota boba'aa idilee irraa gara boba'aa Haaydrooziiniitti jijjiiruuf Maallaqa Yuuroo 35,000 barbaada" jedha Lukaas.
Ogeeyyoonni dhimma kana xiinxalan gareen kun waan gaarii akka hojjetan fi piroojektichi abdii kan qabu ta'uu eeranii jiru.